चीन चरण सेकेन्ड-E9 -Touch पर्दा संस्करण मात्र निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ता स्तरवृद्धि गर्न | Kukai
टेलिफोन: +86 731 89833591
प्रमुख काटन मिसिन
मिसिन लागि कस्नु
कदम सेकेन्ड-E9 -Touch पर्दा संस्करण मात्र स्तरवृद्धि गर्न
अपग्रेड-लागि कसरी टच स्क्रिन संस्करण मात्र
Pls दयालु स्मृति सेव यसको सीमित किनभने त्यहाँ जोखिम छ भन्ने स्क्रिन सिस्टम जब अद्यावधिक तोड्न सक्छ याद गर्नुहोस्
तपाईं को लागि धन्यवाद प्रयोग गर्न सम्मान ग्राहक Kukai सेकेन्ड-E9 स्वचालित प्रमुख नक्कली मिसिन , अनुभव हाम्रो उत्पादन र सेवा समयमा कुनै प्रश्न लागि, तपाईं शुक्रवार +8 GMT गर्न सोमवार हाम्रो सेवा टोली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
सुरु गर्न, कृपया 8G गर्न 2G बीच USB फ्लैश E9 उन्नयन लागि डिस्क तयार। को विशिष्टीकरण 2.0, छैन 3.0 छ।
चरण 1: कृपया जाने हाम्रो सदस्य वेबसाइट (http://user.kkkcut.com/EN/Login.aspx) सदस्य लग इन इन्टरफेस प्रविष्टि गर्न। इनपुट आफ्नो इमेल ठेगाना र पासवर्ड खुसी पार्न लग इन गर्नुहोस् । तपाईंलाई जानकारी अपग्रेड देख्ने गृह पृष्ठ.
चरण 2: आफ्नो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर बन्द गर्नुहोस्, डाउनलोड उन्नयन फाइल नाम आफ्नो सिरियल नम्बर आफ्नो USB फ्लैश डिस्क। (Tips: Be sure to turn off antivirus software to prevent our service pack be dameged by the antivirus software)
चरण 3: अपग्रेड फाइल मा माउस कर्सर राख्नुहोस्, को दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस् र अनजिप वर्तमान फाइल। तपाईं "नाम फोल्डर प्राप्त हुनेछ स्वत: अपडेट "। फोल्डर तपाईँको USB फ्लैश डिस्क छ पक्का गर्नुहोस्। यसरी, आफ्नो USB फ्लैश डिस्क उन्नयन लागि तयार छ।
टिप्पणी: zip गर्न उन्नयन फोल्डर तपाईँको USB फ्लैश डिस्क को मूल निर्देशिका हुनुपर्छ।
चरण 4: आफ्नो E9 खोल्नुहोस् गृह पृष्ठ प्रविष्ट गर्न, र प्रतीक्षा 15 सेकेन्ड को लागि।
चरण 5: युएसबी फ्लैश डिस्क प्लग आफ्नो E9 को फिर्ता गर्न आयत युएसबी connnectors को एक मा संग "स्वत: अपडेट" फोल्डर र प्रतीक्षा 15 सेकेन्ड को लागि।
चरण 6: को botton "प्रेस सेटअप सेटअप इन्टरफेस प्रविष्टि गर्न गृह पृष्ठमा", को botton "प्रेस अपडेट " र क्लिक " सुरु उन्नयन "। त्यसपछि यो हुनेछ स्वचालित रूपमा अपग्रेड.
सुझाव ① त्यहाँ ठूलो नयाँ जोडी प्रमुख अद्यावधिक गर्न डाटा छन् रूपमा, यो45 मिनेट लाग्नेछ । कृपया कृपया तपाईं प्रगति पट्टी सार्न गर्दैन पाउन पनि रोगी हुन।
सुझाव ② कृपया बन्द शक्ति कटौती छैन उन्नयन समयमा स्रोत, वा यसलाई अपग्रेड विफलता कारण हुनेछ, र मिसिन आवश्यकता संभवतः मरम्मत को लागि कारखाना फिर्ता पठाइने।
नोट: upgrate प्रक्रिया पूर्णतया स्वचालित छ, तपाईं केहि गर्न आवश्यक छैन, कृपया गरेको upgrate प्रक्रिया प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
चरण 7: अद्यावधिकपछि, स्क्रिनमा "देखाउने अद्यावधिक कार्य समाप्त। कृपया प्रतिक्षा गर्नुहोस् ... " E9 गृह पृष्ठ प्रविष्ट गर्दा , तपाईं USB फ्लास्क डिस्क बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ।
अब समाप्त भएको छ अपग्रेड गर्नुहोस्।
पोस्ट समय: जुन-23-2017
कोठा 302, निर्माण 10, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, पर्यावरण संरक्षण विज्ञान पार्क, Yuhua जिल्ला, चांग्शा, हुनान, चीन
जब तपाईं हामीलाई जांच पठाउन, कृपया छोड्न आफ्नो नाम देश, इमेल, सेल फोन नम्बर, हामी तपाईंलाई 24 घण्टा भित्र जवाफ हुनेछ। सहयोगको लागि धन्यवाद pricelist लागि जांच
अटो स्मार्ट लकस्मिथ उपकरण म्यानुअल , Sec E9 , स्वतः प्रमुख कटर, व्यवसायिक कुञ्जी काट्ने मेसिन , अटो लकस्मिथ उपकरण , कुञ्जी प्रतिलिपि मशिन स्टोरमा ,